Izingane zosofa izihlalo
Izihlalo ezigcwele amagwebu
Umumo webhola Amasofa
Isitoreji ibhokisi kanye indle
Ingxenye Yesofa Yamasofa
Imibhede Yezilwane Zasekhaya
Metal Pet imibhede
Kungani ifenisha yokhuni oluqinile yezingane isebenzisa izinkuni zikaphayini?
Kulula ukusebenzisa uphayini. Ngizokwengeza kancane ukuthi ungakhetha kanjani uphayini. Kanje: Pine ngoba ukhuni luvulekile, igrisi inephunga kakhulu, hhayi ukukhetha okuhle okwenza ifenisha empeleni. Kepha kushibhile. Ifenisha yezingane emakethe iseyizwe ...
Ifenisha yezingane inkulu ngosayizi, futhi kunengozi engaba khona yamaphutha wedizayini
“Ngesikhathi ngithenga ifenisha yezingane, ngezwa ukuthi kufanele unake amakhona ayindilinga, futhi awuzange unake kakhulu imininingwane yedizayini. Bengingalindele ukuthi izingane zizofakwa iminwe yazo emigodini yohlaka lombhede lapho zidlala. Kuyinto ...
Uhlobo luni lombhede olulungele izingane ezincane？
1. Hlobo luni lombhede ingane olulungele? Umbhede ujwayele ukukhethwa ngokuya ngeminyaka yengane, futhi ngokujwayelekile kunemibhede nezindlwana zokulala. Umbhede ulungele izingane ezisanda kuzalwa, futhi lolu hlobo lombhede lungavikela ingane kahle. Kepha njengoba ingane ikhula kancane kancane, ubunzima ...
Yini esingayithola kusuka kufenisha yezingane ze-DIY？
Ngeminyaka engu-13 yokuhlangenwe nakho embonini yefenisha yezingane, inkampani yethu iqhubeka icabanga ngendlela yokwenza imikhiqizo ingabi mnandi kakhulu, ibe yimiqemane ezinganeni, kodwa futhi ilethe nokudlalekayo, okusebenzisekayo kwezingane nomndeni. Uhlobo lokuqala lwe-DIY amasethi osofa wokukhulisa upholstery, izingane zingazama ukuzihambisa, zenze ...
Uyemukelwa Ukujoyina Umbukiso Wethu Obukhoma mayelana nefenisha yezingane zasenkulisa ngomhla ka-Aug 20, 2020
Ngenxa yobhubhane lwegciwane le-corona olungapheli, asikwazi ukuhlangabezana nawo wonke amakhasimende ethu emibonisweni yendabuko. Ezinyangeni ezi-2 ezedlule, sinombukiso obukhoma ongaphezu kuka-15 ngazo zonke izinhlobo zeziteshi, njenge-online canton fair, i-Alibaba fair online. Kuyindlela enhle yokukhombisa ukuthengisa kwethu okusha nokushisayo ...
Kubantu abaningi, izinja zifana namalungu omndeni.
Kubantu abaningi, izinja zifana namalungu omndeni. Ukuhlala nenja ngemuva komsebenzi yisikhathi esijabulisa kakhulu sosuku.Kodwa abanye abanikazi bakhathazeka ngokubeka ingane embhedeni ebusuku, Bangacindezelwa lapho bephenduka, futhi kungaba nezinkinga zenhlanzeko. Kulezi zinsuku, lapho abantu bethenga imikhiqizo yezilwane, bazo ...
Yini idizayini yefenisha yezingane engaba khona kakhulu yango-2020?
Yini idizayini yefenisha yezingane engaba khona kakhulu yango-2020? - ifenisha yezinkuni ze-DIY kufanele kube ukukhetha okuhle. I-Dongguan City Baby ifenisha Co, Ltd. Isungule uchungechunge olusha lwefenisha yezingane kulo nyaka, okuyinto enhle ukubekwa noma ikuphi ekhaya, ikamelo lokulala lezingane, isenkulisa. Okusha ...
Ukulingana okuku-inthanethi ngombukiso obukhoma
Ungayethula kanjani imiklamo emisha kumakhasimende ethu ayigugu onyakeni ongakaze ubonwe ka-2020? Umbukiso obukhoma uzoba ngenye yezindlela ezinhle. NgoJuni, iDongguan City Baby furniture Co., Ltd. ibambe imibukiso engaphezu kwengu-20 ebukhoma nge-online canton fair platform ne-Alibaba.com. Yisiteshi esisha ukukhombisa i-n ...
IDongguan City Baby Furniture CO., Ltd. yaxoxwa ne-TVS1 "Influential Cantonese Merchant" futhi yasakazwa kuzo zonke izingxenye ze-china ngoNovemba 10, 2019
Dongguan City Baby Ifenisha Co., Ltd.
No.3, Dangkeng Road, Shangtun No.3 Industrial Area, iLiaobu Town, Dongguan, China.